भरतपुरमा नानी प्रत्यारोपणमा आशलाग्दो गति, तर प्रशोधनका लागि तिलगंगा पठाउनुपर्ने बाध्यता – Health Post Nepal
भरतपुरमा नानी प्रत्यारोपणमा आशलाग्दो गति, तर प्रशोधनका लागि तिलगंगा पठाउनुपर्ने बाध्यता
२०७५ चैत १२ गते ७:५७
मेडिकल सिटीका रूपमा विकास हुँदै गएको चितवनमा आँखाको नानी संकलन र प्रत्यारोपण गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ । भरतपुर आँखा अस्पतालले गत वर्षदेखि आँखाको नानी संकलन र प्रत्यारोपण गर्न सुरु गरेपछि आँखाको नानीदान र प्रत्यारोपण गर्नेक्रम बढेको हो ।
भरतपुर आँखा अस्पतालका अनुसार हालसम्म ५५ जनाको सफल नानी प्रत्यारोपण भइसकेको छ भने २ सय २६ जनाले आँखाको नानीदान गर्नका लागि नाम टिपाएका छन् । यस्तै, चारजनाको आँखाको नानी झिकेर प्रशोधन गर्नका लागि काठमाडौंको तिलगंगा आँखा केन्द्रमा पठाउन लागिएको भरतपुर आँखा अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत दयाशंकर चौधरीले जानकारी दिए ।
चितवनमा तत्काल नानीदान गर्ने मानिसको कमी भएका कारण काठमाडौंबाट आँखाको नानी ल्याएर प्रत्यारोपण गर्ने गरिएको छ । ‘हामीले यहाँबाट जम्मा चारजनाको मात्र आँखाको नानी झिकेका छौँ । बाँकी काठमाडौंबाटै ल्याएर प्रत्यारोपण गर्ने गर्छौं,’ प्रशासकीय अधिकृत चौधरीले भने, ‘चितवनमा पनि आँखाका नानीदानका लागि अभियान नै चलाउँछौँ । बिस्तारै आँखादान गर्ने मानिसहरू बढ्दै हुनुहन्छ ।’
चितवनमा नानीको प्रशोधन गर्ने मेसिन नभएकाले तिलगंगा अस्पतालल लैजाने गरिन्छ । त्यहाँ प्रशोधन भएपछि भरतपुरमा ल्याएर प्रत्यारोपण गरिने उनले बताए । उनका अनुसार ११ हजार रूपैयाँमा आँखाको नानी फेर्न सकिन्छ । मुत्यु भएको १२ घण्टाभित्रमा आँखाको नानी निकाल्न सके प्रत्यारोपण गर्न सकिने चौधरीको भनाइ छ ।
मृतशरीरको आँखाको नानीले काम गर्ने भएकाले मृतकका परिवारको अनुमतिमा आँखाको नानी निकाल्ने गरिएको उनले बताए । सबै मानिसको आँखाको नानी सबैमा नमिल्न पनि सक्छ । त्यसका लागि तिलगंगामा प्रशोधन गरेर मेसिनबाट परीक्षण गरेर मात्र प्रत्यारोपण गर्ने गरिएको छ । भरतपुर आँखा अस्पतालमा आँखा प्रत्यारोपणका लागि एकजना चिकित्सक मात्र छन् ।
आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्नुअघि मृतव्यक्तिका आँखा संकलन गरिन्छ । प्रशोधनका लागि तिलगंगा आँखा अस्पतालमा अप्रिसोल केमिकलमा राखेर आँखाको नानी पठाउने गरिन्छ । मृतव्यक्तिको रगत पनि सँगसँगै पठाउने गरिन्छ । सबै रिपोर्ट राम्रो आएपछि नानी फिर्ता झिकाई आँखामा प्रत्यारोपण गरिन्छ ।
पछिल्लो समय भरतपुर आँखा अस्पतालले आँखाको नानीदानका लागि अभियान नै थालेको छ । ‘आँखाको नानीदान गर्ने हेतुले तिलगंगा आँखा अस्पतालमा रहेको नेपाल आँखा बैंकसँग सम्झौता गरिएको छ । त्यसअनुसार संकलित आँखाको नानी उक्त बैंकमा पठाउने र आवश्यकताअनुसार पुनः मगाई बिरामीको आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्दै आएका छौँ,’ भरतपुर आँखा अस्पताललका व्यवस्थापन समितिका सदस्य केशव अधिकारीले भने, ‘आँखा संकलन केन्द्र खोल्नका लागि भरतपुर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज तथा कलेज अझ मेडिकल साइन्सेससँगसमेत सहमति गरेका छौँ ।’
मृत शरीरबाट आँखाको नानी निकाल्न सकिने भएकाले चितवन, नवलपुर र तनहुँको संगमस्थल देवघाटमा आँखाको उप–संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । आँखादान गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई अस्पतालमा आएर नाम टिपाउन अस्पतालले आह्वानसमेत गरेको छ । आँखाको प्रत्यारोपणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विशेषज्ञ चिकित्ससमेत थप गरिएको अधिकारीले बताए ।
कसरी गरिन्छ आँखाको नानी प्रत्यारोपण ?
विशेषगरी १६ देखि २५ वर्षसम्मका बिरामीलाई आँखा प्रत्यारोपणमा प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाले पनि आँखा प्रत्यारोपणमा प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । टाढाबाट आउनेहरूका लागि समेत आँखा प्रत्यारोपणमा प्राथमिकता दिइएको छ । नानीमा चोटपटकका कारण दृष्टि गुमाएका व्यक्तिहरूको मात्र आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्न सकिने डा. पुष्पा गिरी बताउँछिन् । ‘आँखामा फुलो परेका वा दाग लागेका व्यक्तिमा मात्र आँखाको नानी प्रत्यारोपण गरिन्छ,’ गिरीले भनिन्, ‘आँखाको झिल्लीले नै काम गर्दैन भने उसको शल्यक्रिया सफल हुँदैन ।’
क–कसले गर्न सक्छन् आँखाको नानीदान ?
आँखादान स्वस्थ आँखा भएका जोसुकैले गर्न सक्छन् । यसमा उमेर तथा आँखाको पावर कम भएको र चस्मा लगाएको लगायत कारणले कुनै बाधा गर्दैन । किनभने, आँखा फेर्ने काम अथवा आँखाको प्रत्यारोपण भनेको आँखाको डल्लो नै फेर्ने नभई आँखाको नानीको मात्रै प्रत्यारोपण हो । कुनै पनि किसिमको रगतको माध्यमबाट सर्ने रोग नभएर जोसुकैले आँखाको नानीदान गर्न सक्छन् । तर, एचआइभी, भिरिंगीजस्ता रगतको माध्यमबाट सर्ने रोग लागेका मानिसको आँखाको नानी दान गरेर प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने डा. गिरी बताउँछिन् । कुनै कारणवश आँखा घोचेर अथवा मिचेर दृष्टि गुमेमा मात्रै आँखाको नानी प्रत्यारोपण गरी पुनर्दृष्टि पाउन सकिने प्रतिष्ठानले बताएको छ ।
८ महिनामै ६६ हजार बिरामीको उपचार
भरतपुर आँखा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिकमा मात्र ६६ हजार ७ सय ७७ बिरामीको उपचार गरिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये २ हजार ९ सय २६ जनाको शल्यक्रिया गर्नुपरेको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत दयाशंकर चौधरीले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ७६ हजार ४ सय ३१ जना यस अस्पतालमा आँखा परीक्षणका आएका थिए, जसमा ६ हजार ७ सय ६६ जनाको शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
भरतपुर आँखा अस्पताल र नेत्रज्योति संघ भरतपुरले साताव्यापी स्थापना दिवस
भरतपुर आँखा अस्पताल र नेत्रज्योति संघ भरतपुरले आफ्नो स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेका छन् । आज (सोमबार) पत्रकारहरूको आँखाजाँच गरेर स्थापना दिवस मनाउन सुरु गरेको अस्पतालले १८ चैतसम्म स्थापना मनाउँदै छ । यस्तै, १३ चैतमा भरतपुरमा प्रभातफेरी निकाल्ने अस्पतालको कार्यक्रम छ । चौबीसकोठीदेखि सुरु हुने प्रभातफेरी अस्पतालरोड हुँदै मालपोतचोक, भरतपुर आँखा अस्पताल पुगी समापन हुनेछ । यस्तै, सोही दिन चितवन जिल्ला कारागारमा रहेका बन्दीहरूको आँखाजाँच कार्यक्रम रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । संघले स्थापना दिवसका अवसरमा हरेक वर्ष बन्दीहरूको आँखा परीक्षण गर्दै आएको छ ।
१८ चैत अर्थात स्थापना दिवसको दिन भरतपुर आँखा अस्पतालमा भर्ना भई बसेका विरामीलाई फलफूल वितरण, देवघाटधाममा रहेका धर्मार्थ अस्पतालमा निःशुल्क आँखाजाँच र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम छ । नेत्रज्योति संघको ४१औँ र भरतपुर आँखा अस्पतालको ३१औँ वर्ष पुगेका अवसरमा दुई संस्थाले संयुक्त रूपमा स्थापना दिवस मनाउन लागेका हुन् ।
आँखाको नानी प्रत्यारोपण
भरतपुर आँखा अस्पताल